युरोपमा फेरि कोरोनाको संक्रमण बढ्न थाल्यो, डब्लुएचओले दियो चेतावनी – Khabar Silo
विश्व स्वास्थ्य संगठनले युरोपमा लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै कोरोना संक्रमणमा वृद्धि देखिएको जनाएको छ।
उसले यसलाई चिन्ताजनक भनेको छ।
संगठनका क्षेत्रीय निर्देशक डा. हान्स हेनेरू क्लूगले युरोपका ११ देशमा अचानक कोरोना संक्रमित तीव्र गतिमा बढेको जानकारी दिएका छन्।
बिबिसीमा प्रकाशित समाचारका अनुसार अर्मानिया, स्वीडेन, माल्डोभा र नर्थ म्यासोडोनियामा संक्रमित बढेका छन्।
क्लूगले आफूले यसअघि संक्रमण पुनः आउनसक्ने खतरा रहेको बताउँदै आएकोमा अब त्यो यथार्थ भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसबारेमा सचेत नभए ती मुलुकको स्वास्थ्य व्यवस्था धर्मराउन सक्ने चेतावनी उनको छ।
‘यी देशहरूले लकडाउन खुकुलो पार्न सुरू गरेपछि मैले केही हप्ता अगाडिदेखि नै महामारी पुनः आउनसक्ने चेतावनी दिदैं आएको थिएँ’, डा. क्लूगले भने, ‘युरोपका कयौं देशमा यो यथार्थ बनिसकेको छ। ३० देशमा पछिल्लो साता नयाँ संक्रमित बढेका छन्, ११ देशमा यसको गति एकदमै तीव्र छ।’
हालसम्म युरोपमा २८ लाख बढी मानिसमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने १ लाख ९५ हजार बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ।
काठमाडौं । काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागहरुमा बिहानैदेखि झमझम पानी परिरहेको छ । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव छ । अहिले नेपालको पुर्वी भू–भाग नजिकै निम्न चापीय रेखा रहेको छ र स्थानीय वायुको पनि प्रभाव रहेको छ । हाल देशभर सामान्य बदली रहि धेरै स्थानहरुमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । आज दिनभरी देशभर सामान्य […]
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा अब नि’षेधाज्ञा थप नहुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नै दैनिक गतिविधि नियमिततर्फ फर्काउन निर्णय गर्दै अघि ब’ढेकाले उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासनले अब नि’षेधाज्ञा लगाउने छैनन्। उपत्यकामा लगाइएको नि’षेधाज्ञा आज राति १२ बजेदेखि सकिँदैछ। नि’षेधाज्ञा नहुने भएसँगै अब जोरबिजोर प्रणाली अनुसार यातायातका साधन चलाउने नियम पनि खा’रेज भएको छ। भदौ २४ गते नि’षेधाज्ञा खुकुलो […]
घरमा छोरी हुने परिवारलाई नेपाल सरकारले निशुल्क दिने भयो अब यस्तो सुविधा ! काठमाडौ । प्रदेश नं २ सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत बीमा गराएका २७ हजार छोरीको घरमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने तयारी थालिएको छ । छोरी शिक्षा बीमा गराएका २६ हजार ९५६ छोरीको घरमा निःशुल्क इन्टरनेट जडानको तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा […]